BARCAMP MADAGASCAR 2008 | GAZETY_ADALADALA
BARCAMP MADAGASCAR 2008
Posted on 04/10/2008 by gazetyavylavitra
Hafaliana lehibe tokoa ho anay taty Madagasikara ny nandray sy nahita an’i Eduardo Avila niara-nanatenateraka ny Barcamp-Madagascar 2008 androany 04 oktobra tao amin’ny IVOTEL Ambohidahy.
Ny nampalahelo kely ahy fotsiny dia ny tsy nananako fakantsary teny amiko mba hitahirizako ny fotoana mamy tahaka ireny. Enga anie mba ho be no hahatahiry sary ka hahazo amin’izy ireny aho!
Betsaka ny mpandray anjara, ary tena notohaina fotsiny ny fanontaniana maro samihafa.
Betsaka toy izany koa ny vela-kevitra nifanolorana, ary tena nitsangana aza ny mpanotrona sasany fa tsy ampy intsony ny seza. (Angamba ny mpikarakara mba haka sehatra malaladalaka kokoa amin’ny manaraka Tsy fanakianana iny fa filazàna vokatry ny fahitako fa tena nahaliana ny olona tokoa ilay hetsika natao androany.)
Tonga tao ny avy amin’ny fikambanana AMUL nanazàva ny momba ny Logiciels libres. Mpandray anjara iray avy amin’ny Fampianarana ambony momba ny informatika avy any Fianarantsoa kosa indray no nanohana izay hitany fa « mahatsara ny LINUX » eo amin’ny resaka ady amin’ny fidirana an-tsokosoko sy ny « virus »; Haja Ramboasalama indray dia nanazava ny amin’ny tokony hisian’ny IXP eto Madagascar mba hahamora ny fifandraisana ary hiantohana ny tsy fahatapahan’izany raha sendra olana ny atidoha-milina any ampita any; ny E-Saina indray, izay mpiara-miasa rahateo amin’ny Telomiova dia namelabelatra ny vokatra vokariny sy ny tranonkalan-tserasera hi-tao; Patricia kosa dia nanolotra ny vokatry ny diany tany Bruxelle nandritry ny fivahiniany tany niaraka tamin’ireo olona maro era-tany sy ny Rising Voices ary ny Foko; Jentilisa dia namelabelatra fohy izay voka-tsoa hitany tamin’ny fiarahana tamin’ny Globalvoicesonline sy ny fandikàna teny ao amin’ny globalvoicecesonline Malagasy; nisy tamin’ireo mpandray anjara ny nanohana ny fisiana sy ny tombony azo amin’ny fampiasana ny Web2.0; Pierre Maury kosa dia nitondra ny vokatry ny asany amin’ny fanontàna anaty tranonkala ny tantaram-pirenena Malagasy tany aloha be tany (azo alaina maimaimpoana ao amin’ny bibliothequemalgache amin’ny endriny .doc na .Pdf izany). Saingy ny indro kely amin’izy ity dia amin’ny teny Frantsay daholo ireo boky. Eto dia manentana aho ny mba handikàna sy hametrahan’ireo rehetra izay afaka manao izany ny dikanteny vita ho anaty tranonkalan-tserasera ihany koa, mba ho hita sy ho tahirin’ny taranaka Malagasy any aoriana;
Ny momba ny fahalalaham-pitenenana kosa no vela-kevitra nataoko nandritra ity Barcamp Madagascar 2008 ity.
Nahafinaritra sy tamim-pirahalahiana ary tao anaty fahaizana mifanàja tanteraka no niatrehana ny fotoana. Mbola misy ireo hanao famelabelarana amin’ny tolakandro saingy noho ny asa miandry dia tamin’ny 2 ora teo ho eo aho no niala tany ary dia fahatsiarovana mamy no nentiko nody.
Filed under: fiaraha-monina, tapatapany | Tagged: Barcamp-Madagascara 2008, Foko, IVOTEL |
« Ilay RADOn’IZAO TONTOLO IZAO ASSOCIATION « AVYLAVITRA » »
sitlo, on 04/10/2008 at 8:03 said:
Misaotra tamin’ny fitantarana, fa saingy ilay rohy amin’ny hai-tao fotsiny angaha no diso. Mahay miteny anglisy loatra, hahaha
lova, on 04/10/2008 at 8:50 said:
Misotra an’ Avylavitra amin’ny ilay fizarana ny resaka tao amin’ny Barcamp.
tomavana, on 08/10/2008 at 9:46 said:
Misaotra anao amin’ny fampakarana avo ny feon’ny GVO-Malagasy tamin’ny alalan’ny fisoloanao tena
simp, on 09/10/2008 at 11:30 said:
misaotra nitantara eee.
mety io mintsy ngamba le style ee 🙂
le hoe bibliotheque malgache kosa ngamba mila renovation kely fa otran’ny mbola basic html be le izy…